Iyo iPhone 7 yaigona kushandisa musiyano weBluetooth yekubatanidza kune ayo mahedhifoni | IPhone nhau
Tangosara nemaawa mashoma kubva Apple kuvhura yayo nyowani iPhone 7, uye kunyangwe isu tichiziva chero zvese zvatinofanira kuziva nezve iyi nyowani smartphone, kubva kumagadzirirwo ayo kusvika kunenge kwese kwese nezve zvemukati kutaurwa, kuchine kusahadzika nezvekuti Apple ichaita sei gadzirisa kusavapo kwemboni jack. Zvinotorwa sezvisingakoshe kuti izvi zvichaitika, zvikasadaro kungave kurova chaiko kwemwedzi yerunyerekupe nezvazvo, asi hazvisati zvanyatsojeka kana Apple ichizongoti "uye haina jackphone yemusoro" .Ini ndichaita chiziviso chezvaanowanzoita achidzivirira sarudzo iyi uye kuvimba netekinoroji nyowani isina waya yaizopembedza sarudzo yake. Kuve Apple, iyo yekupedzisira inokwanisika, uye nekudaro runyerekupe rwekupedzisira runovimbisa izvozvo. Kana izvi zvikasimbiswa, Apple inogona kuvhura isina waya isina musoro asi iyo haina kushandisa yakajairika Bluetooth, asi musiyano waive wakavimbika uye uchidya bhatiri shoma.
Kana zvasvika kune mahedhifoni eBluetooth, kune maonero akasiyana kwazvo. Kubva pane yakasarudzika iyo inofunga kuti chero tambo inopa yakanyanya kunaka kupfuura iyo yepamberi Bluetooth, kune avo vanotsigira mimhanzi yedhijitari iyo iyo yazvino maBluetooth protocols anotendera kuendesa. Ini pachangu ndiri padhuze nepiri pane yekutanga, uye kwenguva yakareba ndinoshandisa mahedhifoni eBluetooth kuteerera mimhanzi kana podcast, uye izvi zvinoita kuti ndizive matambudziko avo: mahedhifoni asingabatanidzi kune ekutanga uye unofanirwa kudzima iyo Bluetooth uye woibatidza zvakare, zvidimbu zvidiki zvinogara zvisingaite nanosecond asi zvinogumbura, uye kunyanya kuzvimiririra kwemahedhifoni. Icho chokwadi chekuti iwo madiki madiki zvinoreva kuti nzvimbo yebhatiri ishoma, uye izvi zvinoreva kuti iwe unenge uchifanirwa kuvachaja zuva nezuva kana iwe uchizvishandisa kazhinji kazhinji.. Ko kana Apple yainge yagadzira musiyano weBluetooth wakagadzirisa matambudziko aya?
Tim Cook aigona kuenda pachikuva oti "isu tabvisa hofoni jack, asi isu tinokupa iwe nyowani yekubatanidza iyo ichaita kuti ukanganwe tambo nekusingaperi", zvichave zviri nani kupfuura "isu tabvisa headphone jack asi iwe unogona kushandisa Bluetooth mahedhifoni ". Isu tinoziva kuti Apple inofarira tekinoroji yayo iyo inobvumidza kuti isiyane pachayo kubva kune vamwe vese, uye pano yaizouya yakanyanya kudzikira: iwo mahedhifoni anogona kusashanda nechero chinhu. Pano paizouya musoro mukuru wevazhinji vevashandisi vanovenga aya quirks eApple, asi vachiziva avo vanobva kuCupertino, zvirokwazvo ichi hachisi chipingaidzo chekuenderera kumberi.
Zviripachena kuti iPhone yaizove neyakajairika bluetooth uye zvakare neiyi nyowani tekinoroji, asi Apple mahedhifoni angave ekushandisa chete neiyo iPhone, izvo zvandisingafunge kuti zvinoshamisa kune chero munhu. Chinhu chimwe chete icho chiri kuzotanga Mheni EarPods icho chaisazoshanda nechero imwe smartphone kunze kweiyo iPhone, inogona kuvhura AirPods nekubatana kwayo pachezvayo. izvo hazvigone kushandiswa pamwe nezvimwe zviteshi zvakare. Mumaawa mana chete tichabvisa kusahadzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iyo iPhone 7 yaigona kushandisa musiyano weBluetooth yekubatanidza kune ayo mahedhifoni
Mifananidzo inoratidza iPhone 7 nematoni mana mune iyo flash uye isina mvura